Kevin Gameiro Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Kevin Gameiro Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nhoroondo Yese yeChitical Finisher uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname; "Kev". Our Kevin Gameiro Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda zvisingazivikanwi zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvekurapisa kwake kukwanisa kuita zvishoma asi vashoma vanofunga nezveBevin Gameiro yaBoo iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Kevin Gameiro Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Kevin Gameiro akazvarwa musi we 9th waMay 1987 muSenlis, guta riri muOise, 35 makilomita (22 mi) kuchamhembe kweParis France. Akazvarwa kuna Mr naMadzimai Dominique Gameiro vabereki vake.
Vabereki vake ndivo vokuPortugal. Akatanga basa rake rebhora rinotambira ES Marly-la-Ville kwete kure neguta rake reFrance pazera remakore matanhatu. Asati atora 13 seyakaratidzwa pasi apa, akasarudza kuramba ari munharaunda kuburikidza nekushandura mapoka evechidiki akasiyana. Sezvo ane 13 ane makore, Kevin akanga atogara, achidya uye akarara yebhola.
Kunyange zvazvo akaisvonaka paaiva muduku, Gameiro yakaratidzwa neyekare RC Strasbourg player uye scout Jacky Duguépéroux uyo akakurudzira mutambi wacho kubatana nekaimbova kambani. Muna 2004, Gameiro akazadza kutamira kune kechikwata cheAlsatian achibatana semutambo wechidiki. Ikoko ndiko kwaiva nekukura, sekufananidzirwa pasi, kwakapinda. Zvimwe zvakadaro, akadzidza kugona kwake kugona kwekugadzirisa mune iri kambani.
Mushure mekubudirira kwetambo kuLorient kubva ku2008 kusvika ku2011, Kevin akazozivikanwa sewe mutambi wepasi rese. Musi waJune 10, 2011, Kevin akabvumirana neshoko rakapiwa naParis Saint-Germain ndokusaina mari yegore mana pamutengo we 11 mamiriyoni ezvo pamwe nechisarudzo chemabhonasi. Mazuva ake mukambani akaverengwa mushure mokunge 2011 inotora vatengesi veKatar.
Mushure mokucherechedza makwikwi kubva paOni 25, 2013, Kevin akawana chibvumirano nekambani yeSpain Sevilla FC uye yakasaina kontrakiti yemakore mashanu inokosha ye10 mamiriyoni emadhora. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Kevin Gameiro Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
rudo at chekutanga kuonekwa kunongoitika chete mu 11% yematambudziko uye zvinowanzoonekwa kune varume kupfuura vakadzi. Kevin akawirwa naLina paakatanga kuona.
Vose vane vanakomana vaviri Aroni naAyden. Kevin wedded Lina mushure mekunge vaberekera vana vavo vaviri. Icho chaiva chikwata chakavanzika chakanga chichifarira zvikuru nhengo dzemhuri yake yepedyo.
Kevin Gameiro uye mwanakomana wake wokutanga, Aaron ari pedyo zvikuru. Aaron Gameiro anotarisira kutevera tsoka dzababa vake kuti ave mutevedzeri.
Kevin Gameiro Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Kevin Gameiro ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Strengths: Kevin anovimbika mumabasa ake uye Relationships. Iye ane mwoyo murefu, anobatsira, akazvipira uye pakupedzisira, ane mhosva zvikuru.
Kushaya simba: Kevin angave akasindimara, ane pfuma uye asingatenderi.
Chii Kevin Gameiro Anofarira: Anoda kuviga unhu hwake pachena, anoda munda, kubika, mimhanzi uye rudo.
Chii chaKevin chisingadi: Kamwe kamwe-kamwe kuchinja kwekuita mararamiro nevanhu vaanoda, ukama uye zvinetso zvemabasa uye kusachengeteka kwemarudzi ose.
Mukupfupisa, Kevin inoshanda chaizvo uye yakagadzikana. Ndiye mumwe munhu aizoramba achida kuunganidza zvibereko zvebasa rake.
Kevin Gameiro Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Car Choice
Kevin Gameiro ishamwari yakasimba yeAlidi R8 iyo inodhura nezve 135,000 Euros. Anofunga kuti se "Nhoroondo yemakwikwi yemotokari kuti ive nayo".
Kevin Gameiro Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -mhuri
Kevin Gameiro anobva kumhuri yepakati-kati yemhuri pamberi pebhoza pakupedzisira yakabhadharwa. Ane chiPutukezi nhaka kuburikidza nababa vake baba vake. Anouya kubva kumhuri ane unhu hwemafisi akareruka.
Chirungu chechiPutukezi chekuru waKevin Gameiro chakaitika zvikuru panguva ye1960s uye 1970s, kutiza kubva kudzvinyiriri uye kubvumirana, uye kuwana hupenyu hwakanaka. Vakawanda vakatanga kushanda mukuvaka.
Kevin Gameiro Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Akaora mwoyo Portugal
Gameiro aikodzera kumira muPortugal pamusangano mukuru wepasi rose. Muna 2009, ipapo-mutungamiriri Carlos Queiroz akazivisa kuti Gameiro yaiva "Mutambi anofadza" uye kuti iye "Angada kutaura naye" pamusoro pekumiririra Portugal. Zvisinei, Gameiro akarambidza hurukuro, achitaura kuti iye "Yakanga isati iine ukama hwenyika" uye kuti akasarudza kusimudzira France.
Kevin Gameiro Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Sei Akasarudza Athletico Madrid
Mumashoko ake ..."Atletico Madrid inopa zvakanakisisa zvekubatana. Uyewo, kwemwaka yakawanda, boka racho rakaramba richizivikanwa. Ndisati ndauya, ndakaudzwa kuti yakafanana nemhuri huru. Ikoko kwakanga kune mukana wekubatana neBarcelona, ​​asi mupfungwa dzangu, zvakajeka kuti ndinoda kupinda naAtletico apo Atletico inondionana neni. Ndinodada ini ndakabatana nokuti ini ndiri kunzwa zvakanyanya kufananidzwa nevateereri vavo "
Gameiro zvakare akaratidza kuti angadai akawana mari yakawanda nokubva kuSpain, asi akanga asina kuronga kuita kudaro.
Akaenderera achiti: "Mahofisi angu akandiita kuti ndizive nezvezvinhu zvinonakidza zvinowanikwa mune zvemari asi ndaida kugara kuSpain. Ndinonzwa zvakanaka kwazvo pano. Mhuri yangu inoitawo uye La Liga ndeimwe yemhando dzakanaka.
Kevin Gameiro Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Kugadziriswa Kutsamwa
Kevin Gameiro ndiye munhu asingadi kuve akashandurwa kunyanya kana achitamba zvakanaka mumutambo. Mune 2017, Kevin akareurura kutsamwa kwake pamusangano wekupedzisira weUCL mushure mokunge akatsiviwa mumutambo we71st mumutsara wake 4-2 Champions League pamusoro peBayer Leverkusen.
Mutambi weFrance, uyo akamisa imwe yehafu yekuda Antoine Griezmann asati abvisa chikwata chemuchina we58th, akaudza Marca mushure memutambo: "Hongu, ndakanga ndatsamwa nokuti unoda kutamba mutambo wose paunenge uri kutamba zvakanaka. Ndakanga ndakatsamwa zvishoma, asi chinhu chakakosha ndechekukunda kwechikwata. Uyu ibhora, apo mudzidzisi [Diego Simeone] anosarudza uye ndizvo ".
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nekuverenga Kevin Gameiro Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Sebastien Haller Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Franck Ribery Mwana Wehupenyu Nhau Untold Biography Facts
Djibril Cisse Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Samuel Umtiti Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Kingsley Coman Utano Nhau Plus Untold Biography Facts